MAALIIF HIN SALAANNE? - NuuralHudaa
MAALIIF HIN SALAANNE?
Salaanni dirqama guddaa Rabbiin nurra kaaye. Waan warra amanee fii kafare addaan fooyu. Qunnamtii gabrichaa fii Rabbii isaa jidduu jirtu. Isiidhaan milkii guddoon kajeelama, salaataan badirraa tiiyfaman, salaataan haalaa fii amalli namaa tola. Kanaaf maaliif waan gaarii Rabbiin itti nu ajaje salaata laaffifne? Dhimma salaataa waan hunda isii beekhuun Muslima nama tahe hundarratti dirqama. Kanaaf xiqqo dhimma salaataa kanarratti hanga Rabbiin naaf laaffise isiniif katabuun murteeyse. Dubbisaa waliifis raabsaa.
Salaanni afaan Arabaatiin kadhannaa jechuudha. Rabbi kadhatuutu salaata ja’ama. Garuu hikkaan isii kan amantii keeysatti ittiin barbaadamu: Ibaadaa beekkamtuu jechootaa fii hojii qaamaa ifii qabdu, kan jalqabni isii Takbiirtaa, dhumtii isii salaamtaati.
Murtiin salaataa maali?
Salaanni dirqama tahuu Qur’aanaa fii hadiisaatu mirkaneeyse. Muslimni adunyaarra jirus zamana hundatti dirqama tahuu isii beekanii itti dalagaati as gahan. Dirqama tahuu salaataa wanni ibsu hedduu. Rabbiin o tahe Qur’aanaa keeysatti, “Salaanni warra amanerratti yeroo murtaawaa keeysatti akka salaatan dirqama irratti godhamte” jechuun Suuraa Nisaa: 103 keeysatti jala muree ajajee jira. Hadiisa keeysatti ammoo utubaalee Islaamaa shanan keeysaa lammaffaan salaata tahuun ifa galee jira. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e, “Islaamummaan waa shanirratti ijaaramte, 1.Rabbii malee haqaan gabbaramaan hin jiruu amanuu fii Muhammad ergamaa Rabbii tahuu amanuudha, 2.Salaata salaatuudha, 3.Zakaa kennuudha, 4.Soomana Ramadaanaa soomanuudha, 5.Hajjii namni dandahe godhuudha” Bukhaarii fii Muslimii gabaase.
Namni Muslima tahee salaanni dirqama tahuu wallaaluun waan irraa eeggamuu miti. Muslima tahuun isii irratti gadii dhaabbata waan taheef. Irra jabaa waan amantiin shahaadaa booda jabeeysiteeti. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam hoggaa sahaaboota biyya adda addaatti ergu dura shahaadaa jechuun Rabbii fii ergamaa Rabbii akka qeebalan barsiisaa, eegasii salaatatti yaamaa jechuun ergaa ture. Saniif jecha salaanni ajaja Rabbiin jabeeysee dhaame, Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam irra daddeebi’ee dirqamummaa isii barsiise.
Kanarraa ka’uun Ulamaaiin namni salaanni waajibaa miti ja’u kaafira malee Muslima miti jechuun murteeysan. Ulamaa’ii jidduu dhimma kanarratti wal dhabbiin tokkolleen hin jiru. Garuu nama osoo salaanni dirqamaa tahuu amanuu masluufummaaf dhiisu kaafira moo kaafiraa mitii keeysatti wal dhabanii jiran. Dubbiin salaataa jajjabduudha! Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam, Hadiisa Bukhaarii fii Muslim keeysatti, “Nuu fii warra kafare jidduu gargaarummaan jiru salaata, namni salaata dhiise kafare” ja’anii itti muranii jiran.
Kanaaf salaata haa jabeeysinuu, waliif haa dhaamnuu, irrattis wal haa gargaarru.
Yoo Rabbi fedhe itti fufa
September 22, 2021 sa;aa 5:30 am Update tahe